Agaasime Gaardi iyo wariye Siciido-kiin oo hadda laga siidaayey saldhigga Garowe. – Radio Daljir
Garowe, Aug 02 – Waxaa goordhawayd saldhigga dhexe ee magaalada Garoowe laga siiyey agaasimihii Daljir Garowe Cabdiraxmaan Xuseen Xasan ‘Gaardi’ iyo Siciido-kiin Axmed Jaamac oo iyana ka tirsan weriyaasha Radio Daljir ee ka hawlgala xarunta Garoowe.
Labadaan suxufi ee haatan la siidaayey ayaa illaa iyo shalay-galab magribkii ku xirnaa saldhigga ciidanka bilayska ee magaalada Garoowe kaddib markii looga yeeray halkaasi, laguna wargaliyey in ay dawladda u xiranyihiin.
Siidaynta suxufiyiintaan ayaa timid kaddib markii dadaalo waqti badan qaatay ay u galeen mas’uuliyiin ka tirsan dawladda, ururka suxufiyiinta Puntland ee MAP iyo madaxda Radio Daljir oo illaa iyo intii la xiray weriyayaashaan ku mashquulsanaa baadigoobka xorriyaddooda.
Dawladda ayaa xarigga labadaan suxufi ku macnaysay in uu ku qotomo habkii bulshada loo gaarsiiyey war ku saabsanaa qarax shalay-galab ka dhacay magaalada Garowe, kaas oo illaa 2 ruux ay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
Waa markii ugu horraysay oo mas’uul ka tirsan Radio Daljir ama weriye loo xiro war idaacaddu baahisay, waqti intaas le’egna lagu hayo saldhig bilays, marka laga reebo dabayaaqadii sannadkii 2008-kii oo sidaan oo kale loo xiray agaasimihii Daljir Bossaso Maxamed Maxamuud Welcome, kaasoo isna loo xiray war la xiriiray ololihii tartanka madaxweynimada Puntland.
Rajo laga qabo in deg deg xoriyaddooda loogu soo celiyo saxafiyiinta Radio Daljir
Garoowe, August 02 – Waxa Garoowe ka socda dadaal la doonayo in xoriyaddoodii loogu so celiyo agaasimaha Radio Dlajir, xaruntiisa Garowe Cabdiraxmaan Xasan Xuseen iyo wariye Siciido-Kiin Axmed Jaamac oo ka mid ah shaqaalaha Xarunta.
Xubno ka tirsan madaxtooyada, golaha wasiirada iyo ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP ayaa dadaal ugu jira sidii loo sii dayn lahaa labada saxafi, waxana ay goor dhawayd ku booqdeen saldhiga dhexe ee Garowe.
Sida loo xaqiijiyay Daljir, waxa suura-gal ah in labada wariye xoriyaddooda loo soo celiyo 4-ta galabino ee maanta (Talaado) iyada oo uu madaxda Radio Daljirna ay qorsheeynayaan in ay qabtaan shir-jaraa’id bac-dal afurka caawa.
Agaasime Cabdiraxmaan Xasan Xuseen ‘Gaardi’ iyo Siciido-Kiin Axmed Jamaac ayaa xalay bacdal-maqribkii loogu sheegay in ay xiran yihiin saldhiga dhexe ee magaalada Garoowe, halkaas oo ay u tageen kadib markii looga yeeray si wax looga waydiiyo qaabkii ay u tabiyeen qarax dad ku dhinteen oo shalay-galab ka dhacay magaalada Garoowe.
Agaasihii Daljir Garoowe iyo weriye kale oo wali ku xiran Garoowe.
Garowe, Aug 02 – Wali waxaa saldhigga dhexe ee magaalada Garoowe ku xiran agaasimiyihii Radio Daljir ee magaalada Garoowe Cabdiraxmaan Xuseen Xasan ‘Gaardi’ iyo Siciido-kiin Axmed Jaamac oo iyana isla xarunta Daljir Garoowe ka hawl-gali jirtay.
Ciidamada bilayska ee magaalada Garowe ayaa xiray Labadaan suxufi markii laga soo baxay salaaddii makhrib ee shalay, kaddib markii lagu wargaliyey in ay saldhigga yimaadaan, waxaana imaanshahooda ka gadaal loo sheegay in ay xiran yihiin kuwaasi oo illaa iyo haatan lagu hayo saldhigga.
Xiritaanka wariyayaashaan, ayey dawladdu ku sababaysay in ay la xiriirto habkii loo tabiyey qarax shalay galab ka dhacay magaalada Garoowe kaasoo la xaqiijinayo in ay ku dhinteen illaa labo ruux halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
Ma jirto faah-faahin dheerad ah oo wali dhinaca dawladda ka soo baxay oo lagu caddaynayo sababaha dambiyeed ee wariyayaashaan loo haysto iyo waxa ay ku xad-gudbeen toona.
Dhinaca kale waxaa haatan socda dadaallo ballaaran oo ay wadaan bahda war-baahinta ee ka hawl-gasha magaalada Garowe iyo ururada suxufiyiinta kuwaasi loogu suxul-duubayo siidaynta labadaan suxufi.
Laba wariye oo ka tirsan Daljir oo lagu xiray Garoowe kaddib tabin qarax shalay-galab ka dhacay magaalada.
Garoowe, August 01 – Bilayska Puntland ayaa xalay fiidkii (Isniin) Garowe ku xiray agaasimihii Radio Daljir, xaruntiisa Garoowe Cabdiraxmaan Xuseen Xasan ‘Gaardi’ iyo wariye Siciido-Kiin Axmed Jaamac.
Dawladda ayaan si rasmi ah u sheegin sababta loo xiray labadan saxafi, balse saraakiil ka tirsan dawladda ayaa Daljir u sheegay sababo kala duwan sida in wariyayaasha loo haysto qaabkii ay u tabiyeen qarax dad ay ku dhinteen oo shalay-galab ka dhacay agagaarka isgoyska Bulsho oo ah xaafad ganacsigu ku badan yahay.
Sidoo kale, ilo-xogeedyo kale oo ay Daljir la hadashay ayaa sheegaya in dawladdu ku tuhuntay Siciido-Kiin Axmed Jaamac in ay waraysi siisay idaacadda VOA, kaasi oo ay uga war-bixisay tafaasiil ku saabsan qaraxa.
Shalay casarkii ayaa waxa magaalada Garowe ka dhacay qarax sida wararku xaqiijinayaan ay ku dhinteen laba qof, dhawr kalena ay ku dhaawacmeen. Wariye Siciido-Kiin Axmed Jaamac oo ka aag-dhawayd goobta qaraxu ka dhacay ayaa markiiba waraysi ay ku daboolayso dhacdada waxa ay siisay xarunta Daljir ee Garowe.
Wax yar dabadeed markii uu warku baxay ayay saraakiisha bilaysku amar ku bixiyeen in ay Siciid-Kiin timaado Saldhiga bilayska Garoowe. Markii ay Siciido-kiin tagtay galabta magribkii iyada oo uu la socdo agaasime Gaardi ayaa nasiib xumo waxa laga qaaday xoriyaddoodii.
Maamulka iyo shaqaalaaha Radio Daljir ayaa muujiyay sida ay uga xunyihiin xarigan lagula kacay wariyayaasha, waxayna dawladda ay ugu baaqeen in la sii daayo wariyayaasha gudanaya waajibkooda saxaafadeed, isla markaana la xaq-dhawro xoriyadda hadalka, taas oo ah xuquuq si buuxda oo aan mugdi ku jirin ugu cad dasturka KMG ah ee Puntland.